Izici ezihamba phambili ze-Android 11: Ungazithola Kanjani Kunoma iyiphi Ifoni 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
I-Google, njengonyaka, ivuselela uhlelo lwayo lokusebenza lwe-Android ngokwethula izinto ezintsha eziningi ezithokozisayo nokwenza ngcono yonke imisebenzi ebonwe ngokukhishwa kwangaphambilini, ukuthatha ulwazi lomsebenzisi lube sezingeni elisha futhi ilwe ngokulingana nembangi yaso sonke isikhathi, i-iOS. Isethenjwa sesistimu yama-iPhones nokuncintisana okuya ngokuya nangasohlangothini lokwenza ngokwezifiso).
Uma singakwazi ukuzama i-Android 11 zisuka futhi sihehwa yinguqulo entsha, uze kumhlahlandlela ofanele - lapha sizokukhombisa ngempela. izici ezinhle kakhulu ezethulwe nge-Android 11 futhi, ukuze kuphelele ngokwengeziwe, sizokubonisa futhi ungathola kanjani izici ezifanayo kunoma iyiphi i-smartphone ye-Android, ngakho-ke akudingeki ukuthi uthenge i-Google Pixel yesizukulwane esilandelayo noma ulinde i-Android 11 ukuthi ifike kumafoni wesithathu.
FUNDA NONKE: Faka i-Android 11 ku-Windows 10
Umhlahlandlela wesici se-Android 11
Njengoba kushiwo kusingeniso, ezahlukweni ezilandelayo sizokukhombisa ukuthi yiziphi izinto ezintsha ezibalulekile ezingatholakala kunguqulo 11 yohlelo lokusebenza lwe-Android futhi kwisici ngasinye sizokukhombisa nokuthi ungayithola kanjani kunoma iyiphi i-smartphone ye-Android okungenani inguqulo 7.0.
Izimvume zesikhashana zezicelo
Phakathi kwezinto ezintsha ezibaluleke kakhulu kwezokuphepha ku-Android 11, i- izimvume zesikhashana- Uma isicelo sisicela imvume, singanikezwa okwesikhashana kuze kube isicelo siyavalwa; lokhu kuzosivumela nikezela ngezimvume ezibaluleke kakhulu isikhathi esifushane, ngaphandle kokwesaba ukuthi uhlelo lokusebenza lungayisebenzisa futhi uma lungasetshenziswa noma ngemuva kwesikhathi eside somsebenzi.
Uma sifuna ukwethula lo msebenzi kunoma iyiphi i-Android yanamuhla (ekhishwe eminyakeni emi-2 noma emi-3 edlule futhi nge-Android 7 noma ngaphezulu) mane ulande uhlelo lokusebenza Isiqhwaga, itholakala mahhala ku-Google Play Isitolo futhi ikwazi ukumiselela ngokuphelele isistimu yezimvume eyakhelwe ku-Android, ukuze ikwazi ukuhlinzeka ngezimvume zesikhashana ezenziwe ngezifiso (singaphinde sinikeze imvume isikhathi esithile, futhi sikukhawulele ekuvaleni uhlelo lokusebenza).
Kukangaki kwenzeka kithi ukuthi sivale isaziso ngephutha futhi singaqondi ukuthi yiluphi uhlelo lokusebenza ebelibhekise kulo? Ku-Android 11 le nkinga yehluliwe, ngoba kukhona etholakalayo umlando wezaziso ovele ocingweni, ukuze uhlale ukhomba isaziso sohlelo lokusebenza noma uqonde ukuthi imuphi umyalezo ongafundiwe.
Ukuze ukwazi ukuhlanganisa umlando wesaziso kunoma iyiphi i-smartphone ye-Android, mane ulanda uhlelo lokusebenza Yazisa umnakekeli, itholakala mahhala ku-Google Play Isitolo futhi iyakwazi ukwethula lesi sici nakumafoni amadala kakhulu (ukusekelwa okuncane yi-Android 4.4).
Nge-Android 11 ekugcineni singakwazi qopha konke okwenzekayo esibukweni kusuka efonini yethu (ukwakha imihlahlandlela nokuhlinzeka ngosizo) ngethuba loku ibuye iqophe umsindo ngemakrofoni eyakhelwe ngaphakathi, ngakho-ke akudingeki usebenzise izinhlelo zenkampani yangaphandle.
Kusukela kuze kube yi-Android 10 lo msebenzi ubutholakala kuphela ngohlelo lokusebenza, sithole izindlela eziningi zokurekhoda isikrini ngisho nakumafoni amadala; ngalokhu sincoma ukuthi ulande uhlelo lokusebenza Ukuqoshwa kwesikrini se-AZ, itholakala mahhala ku-Google Play Isitolo.
Bolle ngengxoxo ngayinye (amabhamuza engxoxo)
Ku-Android 11, enye yezinto ezidume kakhulu kuFacebook Messenger yethulwa ezingeni lohlelo, okungamabhamuza engxoxo (Amagwebu engxoxo); ngabo singakwazi thola izaziso bese uphendula izingxoxo ngenkathi usebenzisa olunye uhlelo lokusebenzanjengoba zizovela njengamabhamuza agqagqene (achofoze ukuphendula).
Uma sifuna ukusebenzisa lo msebenzi kunoma iyiphi i-smartphone, vele usebenzise I-Facebook Messenger (itholakala mahhala ku-Google Play Isitolo) noma, uma sifuna ukuyinwebisela kuzo zonke izinhlelo zokusebenza, sethemba uhlelo olufana nalolo I-DirectChat, futhi itholakala mahhala ku-Google Play Isitolo.
Phakathi kwezinto ezintsha ze-Android 11 sithola nohlelo olusha lokulawula uhlelo lokusebenza lwe-multimedia: lapho sivula i-Spotifty, i-YouTube noma izinhlelo ezifanayo, Isheke esheshayo lewindi ngqo kusuka kumenyu eyehlayo ye-Android, eduze kwezilungiselelo ezisheshayo.
Singakwethula lokhu kusebenza kunoma iyiphi i-smartphone ye-Android ngokufaka uhlelo lokusebenza olufana ne- Isithunzi samandla, itholakala mahhala ku-Google Play Isitolo futhi iyakwazi ukunikela ngokwezifiso eziningi kubha yezaziso nasesikrini ngezinqamuleli ezisheshayo.
Hlela imodi emnyama
Yize lo msebenzi kungeyona into entsha (ukhona ngokwesibonelo esizukulwaneni esisha se-Samsung), iGoogle nayo ivumile futhi nge-Android 11 ikuvumela Hlela ukusebenza kwemodi emnyama noma imodi emnyama, ngakho-ke ungayisebenzisa ebusuku noma nganoma yisiphi esinye isikhathi sosuku
Izinhlelo zokusebenza eziningi sezivele zikuvumela ukuthi uhlele imodi emnyama (noma imodi emnyama), njengoba kubonakala kumhlahlandlela Ungayisebenzisa kanjani imodi emnyama kuzinhlelo zokusebenza ze-Android ne-iOS; kepha uma sifuna ukuhlela le modi yohlelo lonke, singathemba uhlelo lokusebenza olufana Imodi emnyama, itholakala mahhala ku-Google Play Isitolo.
Ngenkathi lezi zici zizokwenza inhlanhla yama-Pixels amasha nawo wonke amadivayisi azoba ne-Android 11 njengohlelo lokusebenza, akusho ukuthi abasebenzisi abanezinhlobo zangaphambilini ze-Android kuzofanele basale ngemuva! Ngezinhlelo zokusebenza esizincomile, singazuza ngokuphelele kuzici ezithakazelisa kakhulu ze-Android 11 ngaphandle kokuthenga i-Google Pixel noma enye ifoni yesizukulwane esisha ene-Android 11 efakiwe.
Uma sifuna ukuthola i-Android 11 entsha ngazo zonke izindlela, siphakamisa ukuthi ufunde imihlahlandlela yethu Ukuvuselelwa kwe-Android: ngubani oshesha phakathi kwabakwaSamsung, iHuawei, iXiaomi nabanye abakhiqizi? mi Bheka izibuyekezo kumafoni we-Huawei, Samsung ne-Android.